विश्वकी सबैभन्दा सुन्दर रानीको २ हजार वर्ष पुरानो रहस्यको खोजीमा ठूलो उपलब्धी हासिल « गोर्खाली खबर डटकम
विश्वकी सबैभन्दा सुन्दर रानीको २ हजार वर्ष पुरानो रहस्यको खोजीमा ठूलो उपलब्धी हासिल
काठमाडौं । मिश्र (इजिप्ट)की सबैभन्दा विख्यात रानी मानिने क्लि’योपेट्राको रहस्यको खोजीमा ठूलो उपलब्धी हासिल भएको छ । २ हजार वर्षपछि पु’रातत्वविद्हरुले उनको रहस्यको खोजी गरेको दा’वी गरेका छन् । क्लि’योपेट्रालाई विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर रानी पनि मानिन्छ । उनको सुन्दरताको चर्चा विश्वभर हुने भए पनि अहिलेसम्म उनको मृ’त्यु र उनको म’कबरा (चि’हान) एक र’हस्य नै थिए । किनकि अहिलेसम्म कसैले पनि क्लि’योपेट्राको म’कबरा खोज्न सकेका थिएनन् ।डेली एक्सप्रेसको रिपोर्टअनुसार अहिले पु’रातत्वविदहरुले क्लि’योपेट्राको मकबराको खोजी गरेको दा’वी गरेका छन् ।
मिश्रमा सन् ३६५ मा भ’यानक भूकम्प आएको र त्यो भूकम्पमा क्लि’योपेट्राको म’कबरा ध्व’स्त भएको मानिँदै आइएको छ । तर, आ’र्कियोलोजिस्ट क्या’थलिन मा’र्टिनेजले अहिले ए’लेक्जेन्ड्रिया शहरभन्दा करिब ४८ किलोमिटर टाढा यस्ता स’बुत भेटेको दा’वी गरेकी छिन् जुन स’बुतले क्लि’योपेट्राको म’कबरा कहाँ छ भन्ने जानकारी दिन्छन् ।क्याथलिनका अनुसार यो म’कबरा ट्या’पोसिरिस मन्दिर नजिकै छ । यो मन्दिरमा आ’इसिस देवीको पुजा हुन्थ्यो । क्या’थलिनले यो मन्दिरको नजिकै उत्खनन गर्दा २ सय शाही सिक्का भेटेको बताएकी छिन् । यी सिक्काहरुमा क्लि’योपेट्राको अनुहार बनेको छ ।
इ’जिप्टोलोजिस्ट डा. ग्लेन गो’डेन्होका अनुसार सिक्काहरु पुराना कुराहरु प्रमाणित गर्न सक्षम हुन्छन् । क्या’थलिनले भेटेका सिक्काहरुबाट त्यतिबेला क्लि’योपेट्राको शासन थियो र मन्दिरमा देवी आइसिको पुजा हुन्थ्यो भन्ने प्रमाणित हुने डा. गो’डिन्होले बताएका छन् ।डा. गोडिन्होले डेली एक्सप्रेससँग भने ‘अब क्या’थलिनले यो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ कि क्लि’योपेट्राको देवी आइसिसको मन्दिरसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो ।’ सिक्काको एकतर्फ क्लि’योपेट्राको अनुहार बनेको छ भने अर्कोतर्फ ग्रीक भाषामा क्लि’योपेट्राको नाम लेखिएको छ ।मिश्रमा क्लि’योपेट्राको अनुहार भएका २ सय सिक्का भेटिएपछि अब यो ठाउँको आ’सपासमै क्लि’योपेट्राको मकबरा भएको अनुमान गरिएको छ ।
म’कबरामा उनको ममी पनि राखिएको हुन सक्ने अनुमान छ ।मिश्रमा पहिले मन्दिरका पुजारीहरु जब राजा वा रानीको तर्फबाट पूजा गर्थे त्यतिबेला उनीहरु देवी आइसिसलाई राजा वा रानीको अनुहार भएका सिक्क च’ढाउँथे । यो परम्परा मिश्रमा सयौं वर्षसम्म चलेको थियो । अब आ’र्किलोजोजिस्टहरु यी सिक्काको सहयोगले क्लि’योपेट्राको सही अनुहार बनाउन सहज बनाउने प्रयासमा छन् । क्लि’योपेट्राको विषयमा ह’लिउडमा कैयौं फिल्महरु बनिसकेका छन् ।
शाखा अधिकृतमा दिदीबहिनीले सँगै निकाले नाम, यसरी पढ्दा मिल्यो सफलता
नेपालमा पहिलो पटक शल्यक्रिया बिना फेरियो मुटुको भल्भ
गण्डकी प्रदेशमा थपिए ९ जना संक्रमित